Trollduino: a chaizvo ... yakakosha Arduino yekuvandudza bhodhi | Mahara emahara
Trollduino: yakanyanya… yakakosha bhodhi reArduino
Kune akawanda epamutemo uye anoenderana mahwendefa Arduino. Asingagumi mikana yevagadziri vari kutsvaga hwaro kuti vatange yavo DIY mapurojekiti. Iye zvino vagadziri vane zvakare chishandiso chekuwedzera, uye ine zita rinoda kuziva: trollduino. Asi handicho chete chinhu chinoshamisa pane iyi ndiro yakafanana ne Arduino UNO uye izvo zvinoshandisa zvakafanana fomu chinhu.
Uye kana iwe uchinetseka kuti chii chinoita kuti iyi yekuvandudza bhodhi ive yakasarudzika, chokwadi ndechekuti iwe unofanirwa kutarisa kune yayo huru chip. Ndichiri muArduino uye mamwe mabhodhi ekuvandudza iri microcontroller kana MCU, mune Trollduino kesi iri inozivikanwa zvemagetsi: hongu, yakapusa 555 nguva.
Asi… mira, mirira! Pane chinhu chakadaro here? Zvakanaka, ngatiendei nezvikamu. Sezvaunoziva, iyo IC 555 inguva inozivikanwa inozivikanwa ine yakawanda yemikana muiyo DIY nyika. Zvinhu zvikuru zvinogona kuitwa neichi chip uye zvimwe zvishoma zvikamu.
Naizvozvo, munhu (Nyoro Lee Anofarira kubva kuHackaday.io) kubva pawebhusaiti yakauya neiyi Trollduino bhodhi "kushamisika". Nzira yekutsika nharaunda Seizvo zita rayo rinoratidza. Uye mariri anofunga kushandisa a Arduino UNO kune iyo microcontroller yakatsiviwa ne555 timer, yakapusa, asi iyo inogona kushandiswa kubatanidza zvikamu kumapini ayo uye kuronga mamwe mabasa.
Mifananidzo yacho ndeyechokwadi, mavari unogona kuona kuti akaisa sei katatu katatu mundiro pa chimiro UNO. Uye zvakare, mamwe maresidha uye ma capacitor akawedzerwa kubhodhi rekuvandudza, uye kunyangwe jack chinongedzo uye USB chinongedzo chemagetsi (sezvo uchizokwanisa kuchengeta dhata diki mu555 ...). Kana zviri zvipini, sezvaungaona zvinoenderanawo ne Arduino UNO.
Y, kunyangwe iri jee, chokwadi ndechekuti inogona kunge iri zano rakanaka kune vamwe vatangi vanoda kutanga kushanda neIC 555 nenzira yakapusa. Hongu, nekukanganisa kukuru uye kwakadaro, asi kana iwe ukaisa zvinopesana zvinodzivisa uye ma capacitor, unogona kutamba nazvo.
Kana iwe uchifarira, unogona dhawunirodha chirongwa uye uone rumwe ruzivo pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Trollduino: yakanyanya… yakakosha bhodhi reArduino
Chokwadi, zvakaganhurirwa zvichienzaniswa neese mukana unopihwa ne555 (ini handisi kutaura maviri zvakare), asi semafungiro ekutanga hazvina kuipa zvachose.
Servo: mashandisiro eservo mota neArduino
Potentiometer: zvese zvaunofanira kuziva